Buug cusub oo la magac baxay Dhakafaar ayaa lagu Daah-Furay magaalada Minneapolis -
Maalintii talaadada ee bisha June ahayd 6, 2017 waxaa xarunta buggaagta iyo suugaanta ee Open Book lagu qabtay munaasabad lagu daah-furayey buug la magac baxay Dhakafaar oo uu qoray qoraaga da’da yare ee Cabdullahi Janno.
Buugga Dhakafaar ee la soo bandhigay ayaa ka hadlaya ama xooga saaraya, baraarujinayana in laga doodo burburka ku dhacay dadka iyo dalka Soomaaliyad. Waxaana daah-furka buuggan qaaliga ah ka soo qayb-galay Guddoomiyaha Degmadda Lixaad ee Magaalada Minneapolis Cabdi Warsame, qoraayaal Soomaaliyeed, macalimiin, dhallinyaro, carruur iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay munaasabadan lagu daah-furayey buugga Dhakafaar.
Ugu horayn waxa furay barnaamijkii loogu talagalay daah-furka buugga Cabdiraxmaan Saalax oo isagu aayado qur’aan ah, duco iyo waliba taariikh gaaban oo ku saabsan qoraaga buugga Dhakafaar dad weynihii goobta jooga la wadaagay. Cabdiraxmaan oo amaanay qoraa Cabdullahi Janno oo ah aqoon yahay da’yar oo isagu dhexda u xirtay in uu dareenkiisa ku salaysan burburka, dar-xumada iyo waliba duruufaha saameeyey dadka iyo dalka Soomaaliya uu buug ku daabaco.
Kadib waxaa goobta ka hadlay qoraaga buugga Dhakafaar Cabdullahi Janno oo ka hadlay, kana waramay sababtii uu u qoray buuga iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu la soo maray diyaarinta buugan. Cabdullahi Janno ayaa sheegay waxyaabihii ku dhaliyey in uu qalin u qaato qoritaanka buuga Dhakafaar. Sidoo kale qoraa Cabdullahi Janno ayaa sheegay in uu daah-furka buugga la sugayey bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah markii Qur’aanka kariimka iyo waliba suurada Iqra(Akhri) la soo dejiyey.
Cabdullahi Janno ayaa yiri, “Dareenka ku wajahan burburka Soomaaliyeed dad badan ayaa ku qeexay ama ku sheegay gabayo, suugaan, majaajilo iyo waliba qaabab kale oo duwan, balse anigu waxaan garwaaqsaday in aan qalin ku qeexo dareenkayga oo aan qoro buugan Dhakafaar”.
Qoraaga buugga ayaa sheegay in uu buuga Dhakafaar soo bandhigayo caqabadaha hortaagan bulshada, sheekooyinka buugga ku xusanina ay yihiin tusaalooyin abuuraya fursad looga wada hadlo xaqiiqda jirta iyo baaxada ay la eegtahay burburka ay Soomaaliya ku jirtay 26-kii sanno ee la soo dhaafay.
Cabdullahi Janno ayaa u mahadceliyey waalidkiis, xaaskiisa, carruurtiisa iyo waliba dhamaan marti sharaftii kala soo qaybgashay daah-furka buugga. Qoraaga Cabdullahi Janno oo isagu horay u qoray buug loogu magac daro Qasaaye oo lagu daabacay Afka Ingiriisiga ayaa haddaba munaasabada ka akhriyey saddex sheeko oo kamid aha 14-ka sheeko ee uu buugga Dhakafaar ka kooban yahay.
Dadweynihii iyo marti sharaftii iyagu nasiibka u yeeshay in ay ka soo qayb galaan daah-furka buugga Dhakafaar ayaa iyagu su’aalo weydiiyay qoraaga.
Haddaba buugga Dhakafaar oo ah buug soo bandhigaya fikir xor ah iyo farshaxan casri ah, isaga oo wada fariin muhiim ah, murtida ka soo maaxatay Cabdullahi Janno ee Dhakafaar ayaa ah buug qiimo iyo qadarin gaar ah mudan. Waxaanan si gaar ah ugu hambalyeynayaa qoraaga Cabdullahi Janno iyo waliba bulshadda Soomaaliyeed oo iyagu nasiib u yeeshay in ay afkooda hooyo ee hodanka ah uga bogtaan buugga Dhakafaar.
Buugga Dhakafaar ayaad ka heli kartaa bogga internet-ka ee wax laga gato ee Amazon.com. Sidoo kale buugga ayaa mar dhow waxaa si toos ah loogu gadi doonaa qaar kamid ah ganacsiyadda Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis iyo waliba goobo kale oo ku yaala gobolka Minnesota.
Related Items:Featured, Jubbaland, Mogadishu, Puntland, Somali, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis, Somali News, Somali refugees, Somalia
Sharcigii mamnuucayey isticmaalka bacaha lagu adeegto oo la diiday
Dad loo xirxiray banaan baxyadii looga soo horjeeday Shareecada Islaamka iyo Muslimiinta Mareykanka